CNC machining tolerances အကြောင်း သိကောင်းစရာ - သတင်း - Shenzhen SunBright Technology Co.,Ltd
CNC Milling အစိတ်အပိုင်းများ
Die Casting အစိတ်အပိုင်းများ
Plastic Injection Mold ၊
ထိုးဆေး ပလတ်စတစ် အစိတ်အပိုင်းများ
CNC Machining Parts Home Application ကို Casting လုပ်ခြင်း။
Metal Processing Aerospace အစိတ်အပိုင်းများ
CNC Machining Steel ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ
High Precision CNC Milling Machining အစိတ်အပိုင်းများ
CNC Machining Tolerances အကြောင်း သိပါရစေ
အစိတ်အပိုင်းဖလှယ်နိုင်မှုနှင့် အတိုင်းအတာသည်းခံနိုင်မှုဆိုင်ရာ သဘောတရားများသည် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း၏ အသိအမှတ်ပြုခံရသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ နောက်ပိုင်းတွင် အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းသည် ပြဿနာများစွာကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ တင်းကျပ်လွန်းသောသည်းခံမှုသည် ပြီးမြောက်ရန် ဆင့်ပွားကြိတ်ခွဲခြင်း သို့မဟုတ် EDM လည်ပတ်မှုပြုလုပ်ရန် အစိတ်အပိုင်းများ လိုအပ်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ခဲချိန်များကို မလိုအပ်ဘဲ တိုးမြင့်စေပါသည်။ မိတ်လိုက်အစိတ်အပိုင်းများ၏ ခံနိုင်ရည်ရှိမှုနှင့်အတူ "အလွန်လျော့ရဲခြင်း" သို့မဟုတ် မကိုက်ညီမှုများသည် ပေါင်းစည်းရန် မစွမ်းဆောင်နိုင်ဘဲ ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်လာကာ အဆိုးဆုံးအခြေအနေတွင်၊ ချောထုတ်ကုန်ကို အသုံးမပြုနိုင်ပါ။
ဤမနှစ်မြို့ဖွယ်အခြေအနေများကို ရှောင်ရှားရန်၊ ဤဒီဇိုင်းနည်းပညာတွင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည်းခံခြင်းများကို ကောင်းစွာအသုံးချနည်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်အချို့နှင့် ပိုအသုံးများသော မှတ်စာအချို့၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ Geometric Dimensions and Tolerances (GD&T) ဟုခေါ်သော အစိတ်အပိုင်းသည်းခံမှုများအတွက် စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းကိုလည်း ဆွေးနွေးပါမည်။
1. CNC machining ၏ Standardized tolerances
စံနမူနာပုံစံနှင့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ဆောင်ခြင်း သည်းခံနိုင်မှုသည် +/-0.005 လက်မ (0.13 မီလီမီတာ) ဖြစ်သည်ဟု ယူဆပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ အမည်ခံတန်ဖိုးမှ မည်သည့်အစိတ်အပိုင်း၏ အနေအထား၊ အနံ၊ အလျား၊ အထူ သို့မဟုတ် အချင်း၏ သွေဖည်မှုသည် ဤတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်မည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည် 1 လက်မ (25.4 မီလီမီတာ) ကျယ်ဝန်းသောကွင်းကွင်းကို လုပ်ဆောင်ရန် စီစဉ်ထားပါက၊ အရွယ်အစားမှာ 0.995 နှင့် 1.005 လက်မ (25.273 နှင့် 25.527 မီလီမီတာ) အကြားရှိမည်ဖြစ်ပြီး ကွင်းစသည် 0.25 လက်မ (6.35 မီလီမီတာ) အပေါက်ပါရှိပြီး ခြေထောက်တစ်ဖက်တွင် အချင်း၊ ကွင်းကွင်း၏ 0.245 မှ 0.255 လက်မ (6.223 မှ 6.477 မီလီမီတာ) သည် အောက်ပါပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် အလွန်နီးစပ်သော်လည်း သင်သည် ပိုမိုတိကျမှု လိုအပ်ပါက၊ အပိုင်း၏ ဂျီသြမေတြီနှင့် ပစ္စည်းအပေါ် အခြေခံ၍ စီရင်ရန် လိုအပ်သည်၊ ကိုးကားချက်အတွက် ဖိုင်ကို အပ်လုဒ်တင်သည့်အခါ အပိုင်းဒီဇိုင်းတွင် ၎င်းကို ညွှန်ပြရန် သေချာစေပါ။
2. CNC စက်ပိုင်းဆိုင်ရာသည်းခံမှုလမ်းညွှန်
ထို့အပြင် ဤအရာများသည် နှစ်နိုင်ငံသည်းခံမှုများဖြစ်ကြောင်း သတိပြုပါ။ တစ်ဖက်သတ်ဝေါဟာရများဖြင့် ဖော်ပြပါက၊ စံသည်းခံမှုမှာ +0.000/-0.010 လက်မ (သို့မဟုတ် +0.010/-0.000 လက်မ) ဖြစ်သင့်သည်။ ဒီဇိုင်းတွင် သင်သတ်မှတ်ထားသရွေ့ ၎င်းတို့အားလုံးကို မက်ထရစ်တန်ဖိုးများအဖြစ် လက်ခံနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ရှုပ်ထွေးမှုများကို ရှောင်ရှားရန်၊ ပြသထားသည့် "အနေအထားသုံးရပ်" အတိုင်းအတာနှင့် သည်းခံမှုများကို လိုက်နာပြီး 1.0000 သို့မဟုတ် 0.2500 လက်မ အပို သုညအနေအထားကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် လုံးဝအကြောင်းပြချက်မရှိလျှင်။
3. စက်ပစ္စည်း၏ မျက်နှာပြင် ကြမ်းတမ်းခြင်းအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ
အလျား၊ အနံ၊ နှင့် အပေါက်အရွယ်အစားအပြင် မျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းမှုကဲ့သို့သော အစိတ်အပိုင်းသည်းခံမှုလည်း ရှိသေးသည်။ စံထုတ်ကုန်တွင်၊ ပြားချပ်ချပ်နှင့် ဒေါင်လိုက်မျက်နှာပြင်များ၏ မျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းမှုသည် 63 µin နှင့် ညီမျှသည်။ 125µin နှင့် ညီသော အကွေးမျက်နှာပြင်သည် ပိုကောင်းသည်။
ရည်ရွယ်ချက်အများစုအတွက်၊ ၎င်းသည် လုံလောက်သောအချောထည်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများပေါ်တွင် အလှဆင်ထားသော မျက်နှာပြင်များအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အများအားဖြင့် အလင်းပေါက်ကွဲမှုဖြင့် အသွင်အပြင်ကို မြှင့်တင်နိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ပိုမိုချောမွေ့သော မျက်နှာပြင်ကို လိုအပ်ပါက၊ သင်၏ ဒီဇိုင်းတွင် ကျေးဇူးပြု၍ ညွှန်ပြပါ၊ သင်၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ပြည့်မီရန် ကျွန်ုပ်တို့ အကောင်းဆုံး ကြိုးစားပါမည်။
4. ဂျီဩမေတြီအတိုင်းအတာနှင့် သည်းခံနိုင်မှု
နောက်ထပ်စဉ်းစားစရာတစ်ခုရှိသေးတယ်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် GD&T သည်းခံမှုများကို လက်ခံနိုင်သည်။ ၎င်းသည် အစိတ်အပိုင်းအမျိုးမျိုးသော အင်္ဂါရပ်များနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အံဝင်ခွင်ကျရှိသော အရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက်များအကြား ဆက်နွယ်မှုအပါအဝင် ပိုမိုလေးနက်သော အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအဆင့်ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ဤသည်မှာ ပို၍အသုံးများသော နည်းလမ်းများထဲမှ အချို့ဖြစ်သည်။
စစ်မှန်သောအနေအထား- အစောပိုင်းတွင်ကိုးကားထားသောကွင်းစကိတ်ဥပမာတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် X နှင့် Y အကွာအဝေးများနှင့် ဒေါင်လိုက်အပိုင်းအစွန်းတစ်စုံမှ ၎င်းတို့၏ခွင့်ပြုထားသောသွေဖည်မှုများကို သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် အပေါက်အနေအထားကို အမှတ်အသားပြုပါသည်။ GD&T တွင်၊ အရည်အချင်းပြည့်မီသော MMC (Maximum Material Condition) သို့မဟုတ် LMC (အနိမ့်ဆုံး ပစ္စည်းအခြေအနေ) ဖြင့် ပါရှိသော ရည်ညွှန်း datums အစုတစ်ခု၏ စစ်မှန်သောအနေအထားဖြင့် အပေါက်၏အနေအထားကို ကိုယ်စားပြုမည်ဖြစ်သည်။
ပြားချပ်ချပ်- ကြိတ်မျက်နှာပြင်သည် အများအားဖြင့် အလွန်ပြန့်ပြူးသော်လည်း စီမံဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်း အတွင်းပစ္စည်း ဖိစီးမှု သို့မဟုတ် ကုပ်ဆွဲအားကြောင့်၊ အထူးသဖြင့် ပါးလွှာသော နံရံနှင့် ပလပ်စတစ် အစိတ်အပိုင်းများကို စက်မှဖယ်ရှားပြီးနောက် အချို့သော ကွဲလွဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ GD&T ချောမွေ့မှု ခံနိုင်ရည်ရှိမှု သည် ၎င်းကို ကြိတ်ခွဲသည့် မျက်နှာပြင်ရှိ အပြိုင်လေယာဉ် နှစ်ခုကို သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် ၎င်းကို ထိန်းချုပ်သည်။
Cylindricity- တူညီသောအကြောင်းကြောင့်၊ ကြိတ်မျက်နှာပြင်အများစုသည် အလွန်ပြန့်ပြူးပြီး၊ အပေါက်အများစုသည် အလွန်ဝိုင်းနေပြီး၊ လှည့်သည့်မျက်နှာပြင်များအတွက်လည်း အလားတူပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ +/-0.005 လက်မ (0.127 မီလီမီတာ) ကို အသုံးပြု၍ ကွင်းစကွင်းပိတ်ဥပမာရှိ 0.25 လက်မ (6.35 မီလီမီတာ) အပေါက်သည် စတုဂံပုံဖြစ်နိုင်ပြီး အခြားတစ်လမ်းသွားအတိုင်းအတာများမှာ 0.245 လက်မ (6.223 မီလီမီတာ) နှင့် 0.255 လက်မ ( ၆.၄၇၇ မီလီမီတာ)။ cylindricity ကိုအသုံးပြုခြင်းကို machined hole ထားရှိရမည့် concentric cylinder နှစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ ထုတ်လုပ်သူသည် ဤမဖြစ်နိုင်သော အခြေအနေများကို ဖယ်ရှားနိုင်သည်။
အာရုံစူးစိုက်မှု- bullseye ပေါ်ရှိ ကွင်းများသည် ကားတစ်စီး၏ ဘီးများနှင့် axes များကို ဗဟိုပြုနေသလိုမျိုး၊ တူးဖော်ထားသော သို့မဟုတ် ကောက်နုတ်ထားသောအပေါက်သည် coaxial counterbore သို့မဟုတ် round boss နှင့် အတိအကျတူညီပါက၊ concentricity marking သည် ၎င်းကိုသေချာစေရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
Verticality- အမည်တွင်ဖော်ပြသည့်အတိုင်း၊ ဒေါင်လိုက်သည် အလျားလိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်းမျက်နှာပြင်နှင့် အနီးနားရှိ ဒေါင်လိုက်မျက်နှာပြင်ကြားတွင် အမြင့်ဆုံးသွေဖည်မှုကို ဆုံးဖြတ်သည်။ ၎င်းကို ကပ်လျက်အချင်း သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်း၏ ဗဟိုဝင်ရိုးသို့ လှည့်သောပခုံး၏ ထောင့်မှန်ကို ထိန်းချုပ်ရန်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
မြင့်မားသော တိကျမှုရှိသော စက်ကိရိယာကို အသုံးပြုခြင်းသည် သည်းခံမှုထိန်းချုပ်မှုတွင် အထူးဂရုပြုရန် လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် 3D CAD မော်ဒယ်များ၊ GD&T သည်းခံနိုင်မှုဆိုင်ရာ 2D ပုံများ လိုအပ်ပြီး သင်၏ အစိတ်အပိုင်း အရည်အသွေး လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ဝါယာကြိုးဖြတ်ခြင်း၊ EDM တူးဖော်ခြင်း၊ ကြိတ်ခြင်းနှင့် ငြီးငွေ့ခြင်းကဲ့သို့သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို အသုံးပြုပါသည်။
ထို့အပြင်၊ Sunbright သည် ISO9001 အရည်အသွေးစနစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့် AS 9100D၊ NADCAP-NDT လက်မှတ်တို့ကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့သည်။ တောင်းဆိုမှုအရ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏အစိတ်အပိုင်းများအတွက် 100% အပြည့်အဝစစ်ဆေးခြင်းအပြင် အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းအစီရင်ခံစာများ၊ ပထမဆောင်းပါးစစ်ဆေးခြင်း (FAI) စသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။ သင့်တွင်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည့်အပိုင်းများရှိပါက Sunbright ၏တရားဝင်ဝဘ်ဆိုဒ်မှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အရောင်းအကြို ညှိနှိုင်းမှုနှင့် အရည်အသွေး ဝန်ဆောင်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့ စီစဉ်ပေးပါမည်။
အနာဂတ်တွင် စက်မှုစက်ရုပ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လမ်းကြောင်းငါးခု
General Manger Mr Lee သည် Casting Industrial Conference သို့ တက်ရောက်သည်။
CNC machining သည် စက်ရုပ်လုပ်ငန်းအတွက် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။
လိပ်စာ: B1227-1228၊ Yousong သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာအဆောက်အအုံ၊ 1st လမ်း Donghuan၊ Longhua ခရိုင်၊ Shenzhen၊ တရုတ်
CNC တိကျသောစက်၊ CNC အလှည့်အပြောင်းအပိုင်းများ၊ CNC ကြိတ်ခွဲအစိတ်အပိုင်းများ၊ တံဆိပ်တုံးထုသည့်အစိတ်အပိုင်းများ၊ Die Casting အစိတ်အပိုင်းများ၊ Forging အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ပလပ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများကဲ့သို့သော ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို စိတ်ဝင်စားပါက သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အီးမေးလ်ဖြင့် တိုင်ပင်နိုင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် 24 နာရီအတွင်း သင့်အား အကြောင်းပြန်မည်ဖြစ်သည်။
မူပိုင်ခွင့် © 2021 Shenzhen Sunbright Technology Co.,Ltd. - CNC Precision Machining၊ CNC Turning Parts၊ CNC Milling အစိတ်အပိုင်းများ - All Rights Reserved.